Nepal: Mamindra am-pitandremana noho ny Antony Demokratika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2018 16:09 GMT
Taorian'ny fihetsiketsehana saika naharitra teo amin'ny telo herinandro teo, nanaiky ny hamerina ny parlemanta ny Mpanjaka Gyanendra ao Nepal. Nanafoana ny antenimieram-pirenena ny Mpanjaka tamin'ny 2002 satria toa tsy nahomby ny resaka ho an'ny fandriampahalemana nataon'ny governemantan'ilay Praiminisitra Sher Bahadur Deuba tamin'izany miaraka amin'ireo Maoista. Mivelatra haingana be ireo hetsika ao Nepal. Teny antenatenan'ilay hetsipanoherana sy ny toeran'ny Mpanjaka, milaza ny Legal News From Nepal fa:
Niantso ny parlemanta ny Fikambanan'ny Mpisolovava Nepaley tamin'ny Talata teo, izay tokony hivory amin'ny Zoma, mba hamotika ireo didy rehetra nentina nandritra ny fitondran'ny Mpanjaka. Nandrisika ny parlemanta ny Fikambanan'ny Mpisolovava Nepaley mba hamotika ireo didy rehetra nampidirina mba hamefena ny zon'ny vahoaka.
Mailo ny Nepal News, izay manome vaovao ho an'ireo mpizahatany tonga mitsidika an'i Nepal
Raha toa ka midika izany fa afaka mivoatra ny toejavatra ao Nepal (indrindra manodidina an'i Katmandou), mbola mailo foana ireo Maoista manoloana ity fanambarana ity. Nivoady ny hanohy hanakan-dàlana manerana ny firenena sy hanao hetsipanoherana maro avy amin'ireo mpitarika azy mandra-pahatanteraky ny tanjony amin'ny fifidianana antenimieram-pirenena ry zareo.
Manangona lahatsoratra i Amardeep raha toa ka miezaka ny hanakatra ny mety ho endriky ny fiafaran'ny Fitondran'ny Mpanjaka. Misy resaka mahaliana mikasika izany ihany koa miainga ao amin'ny Pickled Politics (rohy maty). Mampitandrina i Blogdai fa mety handimby izany ny fitondram-bahoaka manoloana ireo hiaka heno manao hoe ”kely loatra, tara loatra”. Misy adihevitra be mikasika io lahatsoratra io.
Kely loatra ve ny famaliana ny fangatahanareo? Tara loatra ho an'ny fahazoana vokany tsara avy amin'ireo hetsipanoheranareo ireo ve izao? Te hilaza ve izany ianareo fa hionona amin'ny fahasimban'i Nepal tanteraka? Nihevitra aho fa nikasika ny ”famerenana ny demokrasia” izao rehetra izao. Ka efa am-dàlam-piorenana izy izao dia tsy ilainareo indray?
Maneho fanantenana mailomailo i Bahas ary manasongadina fa hamaritra betsaka ny fahombiazan'ny rivopanovàna ireo safidy ho an'ny hoavy. Manainga fanontaniana toy izany ihany koa mikasika ny hoavin'ny Fitondran'ny Mpanjaka sy ny fihetezany ao Nepal ny United We Blog!. Manana sary tsara vitsivitsy tamin'ny fankalazàna ny fandresena (rohy maty) i Samudaya. Afaka jerena ao amin'ny Flickr ireo sary hafa mahaliana, toy ity iray ity, na amin'ny fikarohana ireo izay mitondra ny tenifototra Nepal.